Faahfaahin: Dagaal ka dhacay duleedka Muqdisho iyo taliska Booliska oo ka hadlay | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Faahfaahin: Dagaal ka dhacay duleedka Muqdisho iyo taliska Booliska oo ka hadlay
Faahfaahin: Dagaal ka dhacay duleedka Muqdisho iyo taliska Booliska oo ka hadlay
Waxaa soo baxaya faahfaahin ku saabsan dagaal saacado socday oo maanta degaanka Jasiira ee duleedka Magaalada Muqdisho ku dhexmaray ciidamada Booliska sida gaarka ah u tababaran ee Haramcad iyo Maleeshiyo hubeysan.
Dagaalkan ayey wararku sheegayaan inuu bilowday markii ciidamada Haramcad ay weerareen isbaaro gaadiidka looga qaado lacago oo maleeshiyada u tiilay degaanka Jasiira.
Dadka degaanka Jasiira ayaa sheegay in saacado badan maanta lagu dul dagaalamay, aysana guryahooda ka soo bixin intii uu socday dagaalka.
Ugu yaraan saddex askari oo midkood uu sarkaal ahaa ayaa lagu dilay dagaalkaas, halka qaar kalena ay ku dhaawacmeen, iyadoo sidoo kale waxaa Khasaare uu soo gaaray maleeshiyadii jidgooyadu u tiilay inkastoo aan tirakoob laga heynin.
Afhayeen Booliska Somalia Sadiiq Aadan Cali ayaa sheegay in goobtii lagu dagaalamay ay caawa joogaan ciidamada Haramcad, isla markaana laga eryey meleeshiyadii joogtay, hase ahaatee warar madax banaan ayaa sheegaya in ciidamada Haramcad ay ka soo baxeen degaanka Jasiira, dibna ugu soo laabteen Muqdisho markii uu soo gaaray khasaare xooggan.
Degaanka Jasiira oo duleedka Muqdisho ayaa mudooyinkan waxaa ku soo batay isku dhacyada dhexmara ciidamada dowlada iyo Maleeshiyaadka hubeysan ee halkaas ka qowleysta.
Previous articleAlshabaab oo caawa soo gashay dergaan u dhaxeeya Dhuusamareeb iyo Guriceel
Next articleQorshaha Nisa kawado Gobolka Geddo oo la ogaaday
Shirka dhuusamareeb 4 Waa rajadii ugu danbeysay ee Xalka Soomaaliya
axmed shiikh - February 5, 2021 0
Shirka dhuusamareeb 4 Waa rajadii ugu danbeysay ee Xalka gaarida hishiis loo Wada dhan yahay ,Waxaa saacado ka harsan tahay Waqti Xileedka madaxweyne farmaajo...
GEERIDA WARIYE JAMAC FARAX, GEESI GALBADAY .
Xafiiska Raisal wasare Abiy Axmed oo shegay in uu bad Qabo...
Madaxwaynihii xukunka laga Tuuray ee Degaanka Tigray Debretion micheal ayaa Waraysi...
axmed shiikh - February 4, 2021 0